Iimpazamo ye Crypto bezimali. Imposiso 3 - Blockchain News
EyoKwindla 10, 2018 admin
Iimpazamo ye Crypto bezimali. Imposiso 3
Ki amanyathelo okhuseleko
Ukutyala imali cryptocurrencies lu dityanisiwe emngciphekweni omkhulu ukhuseleko, kuquka ngenxa yokuba ubukho yokurhweba inani elikhulu imigulukudu abasebenzisa iindlela ezahlukeneyo ukuhlasela ukufumana crypto-mali kubatyali-mali. ke, ngokutsho nesokuvuma cryptotrader Peter McCormack, ukuhlaselwa Crypto izipaji bazinikele imihla. Le yokutshintshiselana nabo phantsi iitshekhi njalo kwi amandla.
kumntu ngamnye cryptocurrency kufuneka bazazi nobungozi kwaye agcine onke amanyathelo xa esebenza cryptocurrencies:
– Khetha indlela cryptocurrency yokugcina: ngokuba kuhle ukusebenzisa KDE ezibandayo nazo backed up;
– Sebenzisa factor-ezimbini uqinisekiso lomsebenzisi
– Faka inkqubo anti-virus oluthembekileyo
– Ungaze ukuveza isithsixho sakho sekhusi
– Soloko ukhangela idilesi izipaji kunye links
– Yiba inkqubo ethembekileyo zokuvula kwaye uhlale-namabinzana
Kwakhona kubalulekile ukugcina ipassword yakho kunye up-amabinzana kwindawo ekhuselekileyo, kungenjalo kungenzeka ukuphinda okumiselwe Mark Frauenfelder, ngubani ku 2017 phantse walahlekelwa bitcoins yakhe ngaphezu $ 32,000. Kwaye ngenxa yokuba walahlekelwa iphepha password 24 amagama isikhwama abandayo. Eqonda ukuba yena akakwazi ukukhumbula iPIN-ikhowudi kwi wallet, ke Yandothusa yi ekuqondeni ukuba akanako ukufumana cryptocurrencies sakhe nangayiphi na indlela.
Frauenfelder wabhenela inkxaso yobugcisa ka isikhwama umenzi crypto, wabhala Forums, Wafuna iindlela my kuye de eyaguqukayo yaba specialist hypnosis, kodwa konke oku akuzange kuwucima.
Nje ngeziphumo, ukuba wancedwa hacker entsha, obhale umyalelo malunga nendlela ukwambula software semali ebandayo. kunjalo, alahlekelwa iinyanga ezininzi uxinezeleko, imali nezekhomishini ukuya Uchwepheshe sokubuyisa igama kunye up-ibinzana.
Iimpazamo ye Crypto bezimali. Imposiso 2 Iimpazamo ye Crypto bezimali. Imposiso 4
Bhala: Richard Abermann
Yintoni Bitcoin nguNdoqo into abayenzayo
Eyona agent of ...
abasemagunyeni Korean f ...
Umzuzwana efuna izimvo f ...
Post Previous:Iimpazamo ye Crypto bezimali. Imposiso 2
Post Next:Ethereum Foundation isaziso abamkeli ye “igagasi lokuqala kwezibonelelo” of $ 2.5 million